म कसरी व्यापार कार्ड डिजाइन गर्न सक्छु? - Print Peppermint
सोधिने प्रश्न / व्यापार कार्ड डिजाइन FAQ हरू / म कसरी व्यापार कार्ड डिजाइन गर्न सक्छु?
म कसरी व्यापार कार्ड डिजाइन गर्न सक्छु?
कसरी एक व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न को लागी: एक कदम कदम कदम गाइड
डिजाईन: शाकिल रहमान
"राम्रो डिजाईन फ्रिजको जस्तो छ - जब यसले काम गर्दछ, कसैले ध्यान दिँदैन, तर जब यो गर्दैन, यसले निश्चित दुर्गन्ध हुन्छ।" - इरेन अउ
अरबौं कार्डहरू अहिले नै यही समयमा छापिएको छ। तर ती मध्ये केवल केही थोरैले फाइलहरूमा उनीहरूको बाटो सावधानीपूर्वक दराजमा सुरक्षित गर्दछ, वा फ्रेमको पछाडि ताकि तिनीहरू कहिले हराउँदैनन्। तर के ती कार्डहरू बचतको लायक बनाउँछ र बाँकी होइन?
यो तपाइँको काम छ, एक डिजाइनरको रूपमा, यो सुनिश्चित गर्न तपाइँको व्यापार कार्ड मात्र बाहिर खडा हुन्छ तर बचत गर्न लायक छ, वालेटमा वरिपरि बोक्न लायक छ। यो शैलीहरू आउँछन् र जान्छन्। तर प्रभावी डिजाइन लामो समय सम्म रहन्छ, र यस्तै गर्न सक्छaव्यापार कार्ड प्रभावी ढंगले डिजाइन गरिएको.
यसको साथ सुरु गर्न ...
जब एउटा व्यवसाय कार्ड बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईंले निर्णय लिनु पर्छ यदि तपाईं भाँडामा लिन चाहनुहुन्छ भने एक पेशेवर डिजाइन कम्पनी वा आफैलाई स्क्र्याचबाट सम्पूर्ण चीज डिजाईन गर्नुहोस् अनलाइन टेम्प्लेटहरू। त्यहाँ धेरै उपयोगी कार्ड बनाउने प्लेटफर्महरू र सफ्टवेयरहरू हुन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्यानभा, भिस्टाप्रिन्ट आदि
त्यस्ता प्लेटफर्महरूले काम गर्न अनुकूलन टेम्प्लेटहरू प्रस्ताव गर्दछ र पूर्ण विकसित व्यापार कार्डमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं कसरी यसको बारेमा जान लाग्नुहुन्छ, तपाईंले व्यापार कार्ड अवधारणा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र यसमा आधारित सुरक्षित डिजाइन अभ्यास गर्नुहोस्।
के तपाई बेच्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई भर्ती गर्दै हुनुहुन्छ? के यो ब्रान्ड प्रमोशन हो? एक अभियान सेट अप? एक प्रभावी व्यापार कार्ड सरल, तर महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
जहाँसम्म, तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय कार्ड डिजाईन गर्न सुरू गर्नु अघि, सामग्रीको क्रममा सोच्नुहोस् तपाईले यस-इन्च चौडा कागजको माध्यमबाट सेयर गर्नुपर्नेछ; सबैको लागि:
"सामग्री पूर्व डिजाइन। सामग्रीको अभावमा डिजाइन डिजाइन होइन, यो सजावट हो। " - जेफ्री Zeldman
व्यापार कार्ड डिजाइन को मौलिक
Bयसैले हामी कसरी तपाइँको ब्यापार कार्ड बनाउने भन्ने बारेको विवरणमा घुम्न जान्छौं, त्यहाँ केहि छन् डिजाइन को बुनियादी तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ। तिनीहरु यस प्रकार छन्:
द्वारा डिजाइन: साम Calvert
यो पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो जुन तपाईंको कार्ड टाढाबाट नै देखापर्नेछ। यो अरू सबै भन्दा पहिले मान्छे को ध्यान आकर्षित गर्दछ। रंगको मनोविज्ञान रोचक छ, तर एक उत्तम मार्केटिंग उपकरण पनि, यदि तपाईंलाई थाहा छ कि यसलाई कसरी तपाईंको फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने, त्यो हो।
रिपोर्टले दाबी गर्दछ कि कार्डहरू चहकिलो रंगले साधारण, सेतोको तुलनामा दश गुणा बढी सफल हुन्छन्।
तपाईको व्यवसाय कार्डका लागि छनौट गरिएको र p्ग प्यालेटमा चार रंगहरू समावेश गर्नुपर्दछ किनभने प्रिन्टहरू जुन तपाइँको कार्ड प्रिन्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ सामान्यतया सीएमवाईके रंग योजना प्रयोग गर्दछ।
यदि तपाईं पहिले नै ब्रान्ड लोगोको हुनुहुन्छ भने, तपाईंको कार्डमा उस्तै र colorsहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो तपाईंको ब्रान्ड छविमा थप गर्दछ तपाईंको ब्यापार कार्डले झल्काउँछ।
जुन र colorsहरू तपाइँ अन्तमा जान्छन्, निश्चित गर्नुहोस् तिनीहरू:
- पाठ पठनीयता सक्षम गर्नुहोस्।
- धेरै उज्यालो र धेरै पनि सुस्त छैनन्।
- एक अर्काको बधाई
द्वारा डिजाइन: सारा एम्बेबी
तपाइँको व्यापार कार्ड को बनावट डिजाईन गर्न आउँदा तपाइँले यसलाई केहि विचार दिन आवश्यक छ। सबै पछि, यो ती चीजहरू मध्ये एक हो जसले मानिसहरूलाई तपाईंको कार्ड बाहिर स्पष्ट बनाएर सम्झना गराउँछ।
आजका धेरै जसो प्रिन्टरहरूले विशेष फिनिश प्रदान गर्दछ जसले तपाईंको कार्डमा स्पटलाइट चम्काउन मद्दत गर्दछ। तपाईं आर्टसी वालेको एर्रेबाट बनावट छान्न सक्नुहुन्छ, साधारणहरू:
द्वारा डिजाइन: राहेल लेवान्डोस्की
तपाईंसँग पहिले नै एउटा एब्लोसिंग के हो भन्ने बारे विचार हुनुपर्छ। टी-शर्टबाट सिक्का सम्म, दैनिक जीवनका धेरै चीजहरू यी दिनहरूमा एक नक्कल बनावटमा आउँदछन्।
अधिकांश कम्पनीहरूले उनीहरूको व्यवसाय कार्डमा उनीहरूको व्यवसायिक लोगोहरू एम्बोस गरिएको पाउँदछन्। यो ध्यान आकर्षण र एक चिरस्थायी छाप छोड्छ।
द्वारा डिजाइन: केट व्हाइट
यो टेक्स्चर टेक्निक एम्बोसिंगको बिल्कुल विपरीत हो। कागजमा "पप" मा केहि क्षेत्रहरू बनाउनुको सट्टा लेटरप्रेसिंग ती क्षेत्रहरु तल धकेल्छ, एकैसाथ inking।
यसले कागजको सतहमा कुँदिएको बनावट दिन्छ। यो एक उत्तम उपकरण हो यदि यदि तपाईको व्यवसाय कार्डमा निश्चित अक्षरहरुलाई तपाईको ब्रान्डको नाममा बढाइएको ग्रेभिट्या दिन चाहानुहुन्छ।
द्वारा डिजाइन: साम Jarvis
के तपाईं चिनिएको एल्युमिनियम पन्नीले तपाईंको ध्यान खिच्दैन जब तपाईं यो केही चीजबाट टाढा भइरहेको देख्नुहुन्छ? वा यसको भागहरु चकलेटका टुक्राहरू ढाक्न? कसै-कसैले यसलाई यति धेरै मनपराउँछन् कि यसलाई संकलन गर्न, जस्तो कि एक श्यासहरू स .्कलन गर्दछ।
छविहरू वा तपाईंको व्यवसाय कार्डका अन्य भागहरू पनि यो बनावट प्रविधिको माध्यमबाट आकर्षक देख्न सकिन्छ। Foil मुद्रांकन एकान टेक्स्ट गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईले बोल्ड टाइपफेस सेट गर्नुभयो।
स्पट यूभी कोटिंग
द्वारा डिजाइन: श्लोमी क्रेमर
यदि तपाईं तलको तल्लोमा आफ्नो कार्डको टेक्स्चर राख्न चाहनुहुन्छ र केही सरल तर सौन्दर्यको लागि जान चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि बनावट हो। यसले तपाईको कार्डको सतहमा केवल सही मात्राको वार्निश सिर्जना गर्दछ, जसलाई यसलाई सहज र अत्यधिक पेशेवर देखिने बनाउँदछ।
यद्यपि यो टेक्निकले केवल व्यवसायिक कार्डको केहि भागहरूमा वार्निश-जस्तो सामग्री लागू गर्दछ, जस्तै लोगोहरू, केहि प्रकारको ग्राफिक्स र शब्दहरू इत्यादि। स्पट यूभी कोटिंग मात्र तपाईलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ जब तपाईलाई आफ्नो कार्डमा उच्चारण गरेको केही क्षेत्र चाहिन्छ।
केवल यसलाई छनौट गर्नुहोस् यदि तपाईं पक्का चम्किलो देखिन्छ यसले तपाईंको व्यवसाय कार्डको रंग योजनाको प्रशंसा गर्न गइरहेको छ। अन्यथा, यो आँखा टाढा बस एक दृश्य हुनेछ।
द्वारा डिजाइन: धातु व्यापार कार्ड
के अधिकांश व्यक्ति यी दिनहरू पहिचान गर्न असफल हुन्छन् कि जब यो डिजाइनको कुरा आउँदछ, विवरणहरू मात्र विवरण रहँदैन। तिनीहरू पूर्ण रूपमा डिजाइन हुन्छन्। जसरी रंग र पाठको पछाडि सम्पूर्ण मनोविज्ञान हुन्छ, त्यस्तै आकार पनि हुन्छ।
अंडाकार आकारहरूले अधिक मैत्रीपूर्ण स्वर दिन्छ, जबकि स्क्वायरहरू व्यावसायिक, व्यापार अन्त्यतिर बढी झुकाव हुन्छन्।
त्यहाँ असीम आकारहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय कार्डमा काट्न सकिन्छ, जस्तै पशु आकारहरू, जुन आज एकदम ट्रेंन्डी हो। दिमागमा राख्नुहोस्, यद्यपि तपाइँको कार्ड धेरै जसो वालेटमा राखिनेछ। एउटा आकार छनौट गर्नुहोस् जुन एकदम तेज छ वा कर्नर गरिएको छैन म्यास वा फोल्ड गर्नका लागि।
द्वारा डिजाइन: अल्फ्रेड राउकोज
रंग, बनावट, र तपाइँको ब्यापार कार्ड को आकार को लागी कुनै चीज को लागी कहिल्यै माछा मार्न छैन यदि अन्त मा, लेआउट गडबडी छ। खराब लेआउट योजना भन्दा बढि दिमागलाई पिरोइदैन।
तपाइँ तपाइँको व्यावासायिक कार्डमा जे भए पनि धेरै जानकारी क्र्याम गर्नु हुने छैन। त्यसोभए यो सबै सँगै स्क्विश गर्नुको सट्टा, वा, त्यस कुराको लागि, यो सबै कार्डमा फैलिएर, यसलाई सावधानीपूर्वक योजना गर्नुहोस्।
तपाईं केन्द्र-पigned्क्तिबद्ध पाठबाट सीमान्तमा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। जेसुकै रूपरेखा तपाईले टाँस्ने निर्णय गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले बाँकी कार्डमा पर्याप्त सेतो खाली स्थान छोडिदिन्छ। किनभने सेतो अन्तरिक्ष पनि आवश्यक छ। तपाईंको कार्डमा रहेको सामग्रीलाई सास फेर्न कोठा चाहिन्छ। सेतो अन्तरिक्ष मात्र प्रदान गर्दछ।
कसरी एक व्यवसाय कार्ड बनाउन
एक व्यापार कार्ड बनाउनको लागि, तपाईंले यी सरल syste व्यवस्थित चरणहरू अनुसरण गर्न आवश्यक छ:
तपाइँको पाठ चयन गर्नुहोस्
द्वारा डिजाइन: एस। आलम
एकचोटि तपाईंले आफ्नो व्यापार कार्डको डिजाइन फंडामन्डेल्सलाई अन्तिम रूप दिनुहुनेछ (रंग, बनावट, आकार र रूपरेखा), यो तपाईंको कार्डमा जाने पाठ छनौटको बारेमा मंथन गर्ने समय हुनेछ।
यो त्यहाँ छ जहाँ तपाईंसँग तपाईंको कार्डको सबै भिजुअल र शाब्दिक तत्त्वहरू समाहित गर्ने शक्ति छ जुन यसलाई अविस्मरणीय बनाउँदछ, जुन व्यक्तिले तुरून्तै देख्न सक्ने छ कि पछि देख्नको लागि।
व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्दा, तपाईंले सहि सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ दृश्य र पाठ बिचमा क्रमबद्ध संतुलन। यो सबै भन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग भैरहेको छ, सूचनाको सबैभन्दा उचित आदेश जुन कुनै पनि व्यवसाय कार्डमा दिइन्छ:
- नाम: किनभने ती उहाँ नै हुन जसलाई तपाईं बोलाउनुहुन्छ, र तपाईंलाई सम्झना गराउनुहुनेछ। यसका लागि ढाँचा फरक हुन्छ र व्यक्तिगत छनौटको कुरा हो। तपाइँ तपाइँको आडनाव, तपाइँको पूरा नामको आद्याक्षर वा केवल थर र अन्य धेरै दिन सक्नुहुन्छ।
- कम्पनी नाम: किनभने यो निश्चित रूपमा दिइएको छ। व्यक्तिगत ब्रान्डहरूको मामलामा, कार्डमा केवल तपाईंको नाम र बाँकी निम्न जानकारी समावेश गर्दछ।
- कार्य शीर्षक: किनकि यसले व्यक्तिहरूलाई तपाईं को हो र तपाईं के गर्नुहुन्छ, कसरी भेट्नुभयो र किन यो तपाईंको कार्डमा समात्न लायकको छ भनेर सम्झन मद्दत गर्दछ।
- फोन नम्बर: होईन, कुराकानी अपरिहार्य छ।
- ईमेल: किनकि यो पेशेवर हो, किनकि यो आजको संसारमा धेरै मानिसहरूसँग सञ्चारको मोड हो र किनभने फोन नम्बर हराउन सक्छ जबकि एक ईमेल यति सजीलो हराउने छैन।
- वेबसाइट यूआरएल: किनकि भ्रमणका लागि आमन्त्रित गर्ने यो अधिक सूक्ष्म तरीकाहरू मध्ये एक हो।
- सामाजिक संजाल: किनभने प्रायः प्रत्येक व्यक्ति तपाईले आफ्नो कार्ड तपाईलाई दिनु हुन्छ घर जाँदा र तपाईलाई खोज्न बाध्य हुन्छ। यो तपाईंको मार्केटिंगको लागि पनि राम्रो हो किनकि अधिक व्यक्तिहरूले तपाईं र तपाईंको सेवाहरूको बारेमा राम्ररी जान्दछन्।
- ठेगाना: किनभने तपाईंले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको अफिस वा स्टोरमा तान्न आवश्यक पर्दछ।
- QR कोड: किनकि यो माथिको जानकारीको टुक्राहरूको जत्तिकै प्रयोग नभए पनि, बाँकी डाटामा तपाईंको हातहरू लिनको लागि यो अझै सर्टकट हो।
- नारा: किनभने तपाईंको कार्डको बाँकी सामग्रीमा थोरै व्यक्तित्व र आकर्षण थप्नाले तपाईंको कार्डलाई बाहिर देखाउँदै लामो बाटोमा जान्छ।
समर्थन छविहरू थप्नुहोस्
द्वारा डिजाइन: मार्क बेली
तपाइँ सेतो पृष्ठभूमि बिरूद्ध सादा पाठको साथ व्यापार कार्ड भरि आउनु भएको हुन सक्छ, कुनै छविहरू। व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्ने यो परम्पराको जस्तो पेशेवर र साधारण हुन सक्छ, यो वैकल्पिक हो।
तपाईको आफ्नो छविहरू तपाईको कार्डमा थप्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई मद्दत गर्नको लागि यस प्रक्रियालाई अलग देखिन। यद्यपि तपाईंको व्यवसाय कार्डमा जानका लागि छविहरू अनियमित हुन सक्दैन। तिनीहरू हुनु आवश्यक छ:
- तपाईंको ब्रान्डको छविको साथमा।
- पृष्ठभूमिमा मिल्ने र colorsहरू समावेश गर्दछ (तपाईंको व्यवसाय कार्डमा रंगहरू, त्यो हो)।
- दृश्य भिन्न।
तपाईंको व्यवसाय कार्डको अगाडि कभरको मात्रामा निर्भर गर्दै, तपाईं यसको पछाडि इमेजरीको साथ कार्ड डिजाइन गर्न पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। फिक्का पृष्ठभूमिको रूपमा छविहरू हाइलाइट गर्नु सामान्य अभ्यास पनि हो जब व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्ने क्रममा।
रचनात्मक हुन प्रयास गर्नुहोस्। छविहरू दृश्यहरू प्रतिनिधित्व गर्ने विचार हुन्। तपाईंले आफ्नो कार्डमा प्रदर्शन गर्न छनौट गर्नुभएको इमेजरीको प्रकार तपाईंको आत्मामा सानो विन्डो जस्तै हो। प्रशिक्षित दिमागले तपाईको इमेजरीको छनौटको विश्लेषण गरेर तपाई मार्फत देख्न सक्छ।
केवल doodles बाट पेशेवर फोटोग्राफिक सामग्रीमा, समर्थन छविहरू तपाइँको ब्रान्ड सन्देश र पहिचान ठूलो र स्पष्ट प्रतिध्वनि हुनेछ।
कार्ड सामग्रीबाट छान्नुहोस्
द्वारा डिजाइन: फोंग जयिस
यो जहाँ धेरै मानिसलाई सम्भव भएसम्म नवीन हुने मौका छ। के तपाईंले कहिल्यै कपडाको टुक्रा याद मात्र गर्नुभएको छैन? व्यक्तिले तपाईको ब्यापार कार्ड मनमा धेरै राम्रो तरीकाले राख्न सक्दछ, यसको स्पर्शको भावनाले।
निश्चित, कागज शायद तपाईको कार्ड सामग्रीको पहिलो रोजाइ हुने छ। तर बाकस बाहिर एक मिनेट को लागी सोचौं। तपाईंको व्यवसाय कार्डको लागि प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ अन्य फनकी र अनौंठो सामग्रीहरू हुन सक्छ, जस्तै:
- चमकदार, एन्टिक गुरमेट स्नैक्सको आवरण
- पहिले नै बनावट सामग्री
- उच्च-गुणवत्ता कार्डस्टॉक
- पारदर्शी प्लास्टिक
... र अधिक धेरै।
आकार र तपाईंको कार्ड आकार
द्वारा डिजाइन: एडिता चोबन
को प्रविधि मर्न काटी ब्यापार कार्डहरू डिजाईन गर्नको लागि आउँदा यो प्रयोगमा छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको कार्डमा कुनै पनि हिसाबले काट्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसलाई नयाँ सम्झौताको रूपमा याद गरेर।
कसरी तपाईंको कार्ड वालेटमा फिट हुनेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, तपाईं पेशेवर खोज, सरल-कटाहरू वा रचनात्मक आकारहरूको लागि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो डिजाईनिंग प्रतिभालाई पूरै नयाँ स्तरमा लैजान चाहनुहुन्छ भने, थ्रीडीमा कार्ड डिजाईन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सब भन्दा साधारण ब्यापार कार्ड आकार x 55 x mm 85mm हो, तर त्यहाँ अन्य मापदण्डहरु पनि भेटिएका छन्, जुन यी हुन्:
उत्तर अमेरिकी मानक: ×.× × २ इन। (.3.5 2..88.9 × .50.8०. mm मिमी)
यूरोपीयन मानक: 3.346 × २.१2.165 in इन। (× 85 × mm× मिमी)
ओशिनिया मानक: 3.54 × २.१2.165 in इन। (× ० × mm× मिमी)
द्वारा डिजाइन: डिजाइन 4you
टाइपोग्राफी एक छाता पद हो, यसले निम्न तत्वहरू समावेश गर्दछ:
के तपाईले भन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको प्रतिनिधित्व गर्ने सही तरिका पत्ता लगाउनुहुन्न भने तपाईको लागि केही मूल्यवान हुन सक्छ। तपाईको ब्रान्ड छवि धेरै फन्टको प्रकारमा निर्भर हुन्छ जुन तपाईले आफ्नो पाठ प्रदर्शन गर्न छान्नुहुन्छ।
तपाईंले बच्चा र बच्चा उत्पाद वर्गमा खस्ने कम्पनीहरूले फन्की, बालिश फन्टहरू प्रयोग गरेको याद गर्न सक्नुहुनेछ जबकि टेक्नोलोजिकल उत्पाद वर्गका अन्य ब्रान्डहरूले भारी सेट, लाउड फन्ट प्रयोग गर्दछ जुन त्यस्ता ब्रान्डको छवि र उनीहरूको सन्देश झल्काउँदछ।
तपाईंको सेवाहरूको कोटीमा आधारित, त्यहाँ बिभिन्न किसिमका छन् फन्ट प्रकारहरू बाट छनौट गर्न। एक स्वच्छ, आधुनिक sans-serif, एक सुरुचिपूर्ण स्क्रिप्ट, क्लासिक सेरिफ फन्ट - फन्टको लागि जानुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्ड सन्देशसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
नाम र शीर्षक इत्यादि को लागी सजावटी फन्ट र लिपि अधिक उपयुक्त छ किनकि उनीहरु लाई पढ्न गाह्रो छ, त्यसैले त्यस्ता शीर्षकहरूका लागि रिजर्भ गर्नुहोस् जुन सामान्यतया ठूला आकारका फन्टहरूमा प्रतिनिधित्व हुन्छ।
व्यापार कार्डमा पाठको लागि मानक आकार ppppt हो। जे होस्, तपाई तपाईको ब्रान्डको नामको आकार बढाउन रोज्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, बाँकी रहेको टेक्स्ट सानो राखेर। समग्रमा, आकारहरू सहज पठनको लागि अनुमति दिनुपर्दछ।
व्यापार कार्डमा पाठको केहि टुक्रा रंग्नु त्यो जानकारीलाई फरक पार्ने राम्रो र प्रभावकारी तरीका हो। जे होस्, यो धमिलो पार्नु हुँदैन वा बाँकी पाठलाई फरक ढ colored्गले पछाडि राख्नु हुँदैन।
तपाइँको डिजाईन राख्नुहोस्
द्वारा डिजाइन: चटगाउँ नरम
तपाइँको व्यवसाय कार्डमा तपाइँको छनौट गरिएको जानकारी राख्न, सकेसम्म सेतो खाली ठाउँको लागि छोड्नुहोस्। यो मात्र होईन किनकि यसले ठूलो पढ्न योग्यको लागि अनुमति दिन्छ, तर यो पनि किनभने तपाईंको लक्षित श्रोताले जानकारीलाई जान्नु आवश्यक छ त्यस्तै प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पर्याप्त विशेष छ।
तपाईंले पाठको प्लेसमेन्ट व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। यदि तपाइँको जानकारी एक तर्फ कवर गर्न धेरै छ भने, लोगोको लागि कार्डको साइड १ प्रयोग गर्नुहोस्, तपाइँको नाम र तपाइँको कम्पनीको शीर्षक जबकि साइड २ सँग बाँकी जानकारी भर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लेखित सबै तत्वहरू, पाठ देखि टाइपिंग र तपाईंको व्यवसाय कार्डको बनावटमा, सँगै मिलेर काम गर्दछ यदि मात्र यदि तपाईं एक लेआउट डिजाइन गर्नुहुन्छ जुन उनीहरू सबैलाई सँगै एक तरीकाले तपाईंको ब्रान्डको सन्देशसँग संगत बनाउने पोषण गर्दछ।
ढाँचालाई अन्तिम रूप दिनुहोस्
द्वारा डिजाइन: सर्गेई पोमिनोभ
के तपाइँ सबै सान्दर्भिक जानकारी सहि प्रदान गर्नुभयो? त्यहाँ केहि त्रुटिहरू छन् जुन सुधार गर्न आवश्यक छ? के तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ इमेजरी (यदि कुनै छ भने), पाठ र र togetherहरू सँगै कसरी देखिन्छन्?
यदि अरू कसैले तपाइँलाई एक कार्ड हस्तान्तरण गर्‍यो जुन यस्तो देखिन्छ कि तपाइँको ब्यापार कार्ड यस्तो अवस्थामा देखिन्छ, के तपाइँ यसलाई लामो समयसम्म राख्न चाहानुहुन्छ? यदि होईन भने, के तपाइँले यसलाई बाहिर फाल्न बनाउनुभएको थियो र किन? तपाईंको आफ्नै कार्डको लागि त्यसमा काम गर्नुहोस्।
ब्लीड संग प्रिन्ट गर्नुहोस्
अब कार्ड काट्ने चरणलाई सीधा तीन चरणहरूमा विभाजन गरौं। यी चरणहरू वास्तवमा कार्ड सेक्सनहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो अन्तिम व्यापार कार्ड डिजाइन डिजाइन गर्नु अघि अवस्थित हुनु आवश्यक छ।
सुरक्षा रेखा (किनारबाट ०.२0.125 ईन्च) - यो तपाइँको कार्डको बोर्डर हो। यस लाइन को बाहिर पतन केहि पनि काटिने छ। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि कुनै पाठ वा छवि सामग्री सुरक्षा रेखा भन्दा पर जान्छ। यस "सुरक्षित क्षेत्र" भित्र सबै सामग्री राख्नुहोस्।
लक्ष्य रेखा (ट्रिम रेखाबाट ०.१२0.125 इन्च) - नामले संकेत गरे जस्तै यो रेखा हो जसमा कार्डहरू प्राय: काटिन्छन्।
ब्लीड क्षेत्र - यो हटाउनु पर्ने कार्डको बाहिरी भाग हो। एक 3mm राख्नुहोस् रगत खानुपर्छ, उही रंगमा तपाईंको कार्डको पृष्ठभूमिमा त्यसैले यसको किनारा अछुत रहन्छ। केवल अन्तिम डिजाइन फाइल प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ, डिजाईन आफै होइन, ब्लीड हुनु आवश्यक छ।
व्यापार कार्ड डिजाईन चेकलिस्ट
तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय कार्ड सिर्जना गरेपछि, आफ्नै खातिर एक चेकलिस्ट बनाउनुहोस्। यसले तपाइँलाई यो सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाइँको व्यापार कार्ड कुनै पनि समय चाँडै नै भय terrible्कर भाग्य भेट्दिन, एक पटक हस्तान्तरण गरीयो।
“डिजाईन यस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। डिजाइनले कसरी काम गर्दछ। " (स्टीव जॉब्स) के तपाइँ तपाइँको व्यापार कार्ड को बारे मा एकै भन्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँको कार्डले एक अद्भुत पहिलो छाप छोड्दछ? यदि यो कुरा गर्न सक्दछ भने, के तपाइँले भन्नु भएको सुन्न केही समय खडा हुनुहुनेछ?
"मानिसहरूले डिजाइनलाई वेवास्ता गर्छन् जसले मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्दछ।" (फ्रान्क Chimero) के तपाइँको कार्ड को डिजाइन त्यसो गर्छ? तपाईं यसलाई कसरी ठीक गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईंले आफ्नो आवश्यकताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त आकार र आकार छान्नुभयो? यो धेरै थोरै वा धेरै कम छ, वा सहि छ?
के डिजाइन तपाइँ र तपाइँको ब्रान्ड छवि फिट छ? के डिजाइनले तपाईंको लोगो प्रतिबिम्बित गर्दछ? यदि होईन भने तपाईं कसरी यति बनाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाइँको कार्डको डिजाइन ईमान्दार छ कि यसले तपाइँ र तपाइँको ब्रान्डको बारेमा झल्काउँछ
के तपाइँ तपाइँको कार्ड छुट्टि बनाउन को लागी त्यो विशेष स्पर्श गरीएको छ?
के तपाईंको व्यवसाय कार्डको अतिरिक्त प्रयोगहरू छ? के यो टाँसिएको छ, ताकि व्यक्तिहरू यसलाई उनीहरूको फ्रिजहरू इत्यादिमा पोष्ट गर्न र तुरून्त तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्दछन्?
के तपाइँ तपाइँको कार्ड प्रिन्ट गर्नु अघि एक डिजाइनर परामर्श गर्नुभयो?
के तपाइँको वेबसाइट र तपाइँको कार्ड मा अन्य प्रचार सामग्री लगातार र अप-टु-डेट छ? के त्यहाँ दिइएका जानकारीमा कुनै अनावश्यक छ?
के तपाईं उन्नत प्रविधिको राम्रो प्रयोग गर्नुभयो, जस्तै सीमाना बेवास्ता गर्ने वा र yet्गमा पैसा बचत गर्ने पेशागत अझै रमाईलो कालो र सेतो रंग योजनामा ​​टाँसिएर?
के तपाइँको कार्ड मा आधारभूत डिजाइन सिद्धान्तहरु, विशेष गरी टाइपोग्राफी सम्बन्धित छ?
के तपाईं अवरोध भित्र रचनात्मक पाउनुभयो? के तपाईंले आफ्नो कार्डमा स्थान कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुभयो? के यसको आकार पर्याप्त आकर्षक छ?
के सामान्य त्रुटिहरूलाई वेवास्ता गरियो?
के कुनै विशेष समाप्तिको प्रयोग गरिएको थियो? यदि होईन भने, केहि माथि उल्लेखित असामान्य सामग्रीहरू कोशिस गर्नुहोस्!
के तपाइँको कार्ड उपयोगी छ, वा यो केवल कागजको अर्को टुक्रा हुन सक्छ सम्भवतः तिनीहरूको बाँकी कागज पाइलहरूमा अन्तमा? उदाहरण को लागी तपाई यसलाई एक लघु आर्म चेयरमा बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाइँ यसलाई पिन होल्डरको रूपमा कार्य गर्न डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईंले आफ्नो कलाकृति डबल-जाँच गर्नुभयो? के यो तपाईंको उद्देश्यको लागि हो, वा अझ राम्रो चीज हो?
त्यहाँ धेरै तरीका छन् तपाईको आफ्नै व्यवसाय कार्ड डिजाईन गर्नका बारे। आजको प्रतिस्पर्धी संसारमा जहाँ व्यवसाय कार्डहरू हस्तान्तरण गरिँदै छन्, एउटालाई सिर्जना गर्ने जुन चाँडै डम्पमा फ्याँकिनेछैन मुश्किल छ। तर आधारभूत डिजाइन सिद्धान्तहरू र रचनात्मक दृश्यहरूको साथ, यो धेरै राम्रो छ।
मैले तपाईलाई आफ्नो वा तपाइँको कम्पनीको कर्मचारीहरु को लागी कसरी एक व्यवसाय कार्ड बनाउन को लागी चरण निर्देशन चरण देखाइएको छ। मलाई थाहा छ यो हुन सक्छaकुनै डिजाईन गर्ने अनुभवको साथ कसैलाई अलमल्ल पार्दै। त्यसोभए यस विषयको बारेमा तपाइँलाई केहि प्रश्नहरू छ भने पुग्न संकोच नमान्नुहोस्। हामी तपाईंलाई कुनै पनि हिसाबले मद्दत गर्न चाहन्छौं। तर यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईंसँग यति धेरै समय छैन, तपाईं हाम्रोबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ डिजाईन सेवाहरू। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको हामीलाई तपाईले के चाहानुहुन्छ बताउनु भएको छ र हामी तपाईको व्यापार कार्डहरु प्रिन्टि and र शिपिंग सम्मका अरु सबै चीजहरुको ख्याल राख्छौं। हो, यो सरल छ!